Home » Arts & Humanities » ကဗျာပြခန်း အမှတ် (၁၀)
ကဗျာပြခန်း အမှတ် (၁၀)
Posted by Mr. MarGa on Oct 1, 2013 in Arts & Humanities, Best Web Awards, Creative Writing, Myanmar Gazette, Poetry | 49 comments
ကဗျာပြခန်း တာဝတိံသာမှ အက်ဆေးများ
တစ်လမ်းလုံး ပခုံးထက်မှာ လွယ်လာသော အိတ်ကို အားရပါးရ ပစ်ချလိုက်သည်။
ပိတ်ထားသောတံခါးရှေ့ရှိ ဆိုင်းဘုတ်ကလေးကို ဦးမာဃ တစ်ချက် ဖတ်လိုက်သည်။
ဆိုင်းဘုတ်ကို ဖတ်ပြီး အတွေးစလေးတွေက အတိတ်ကို နည်းနည်း လွင့်မျောသွားသည်။
သို့သော် ကြာကြာမတွေးနိုင်၊ ခရီးပန်းလာသည်မို့ အထဲဝင်ရန် တံခါးကို ခေါက်လိုက်တော့သည်။
သုံးချက်တိတိ ခေါက်အပြီးမှာတော့ တိုင်ပင် ကိုက်ထားသည့်အလား တံခါးက ဖြတ်ခနဲဆို ပွင့်သွားသည်။
အထဲကနေ ထွက်လာသူကတော့ ဒညင်းဝက်(အဲလေ) အလင်းဆက်။
ရောက်ရောက်ချင်း ဆောက်နှင့်ထွင်း ဆိုသလို အားရပါးရ မေးရှာသည်။
‘ဟဲ့ သဂျားးး ဘာလာလုပ်တာလဲ’ တဲ့။
သူမေးမှ လူတောင် မျက်စိ လည်ချင်ချင် ဖြစ်သွား၏။
‘ဟဲ့ ငါက ဘာလာလုပ်ရမှာတုန်း အလုပ်ကိစ္စပြီးလို့ ပြန်လာတာပေါ့။ သွားတာမှ ဆယ်ရက်ကျော်လောက်ကလေးကို အတိတ်မေ့သွားပလား’
အခွင့်ရတုန်း ဖိ ဟောက်ပစ်လိုက်သည်။
အဲဒီတော့မှပဲ ကိုယ်တော်ချောက ‘အေးးး ဟုတ်သားးး ငါ မေ့သွားတာ… လာ အထဲဝင်’ တဲ့။
ထိုကျမှ ရုံးခန်းထဲ ဝင်တဲ့ကိစ္စ ပြီးလေတော့သည်။
ဝင်လာတာ မြင်တော့လည်း လှမ်းတော့ မေးကြရှာသား(မကောင်းတတ်လို့လားတော့မသိ)
မွန်မွန်က ထိုင်ရာမထ လှမ်းအော်သည် ‘သဂျားး ငါ့ပြခန်းမှာ လာပြီး ကူပေးဦး ‘ တဲ့
အင်း… ရောက်ရောက်ချင်းကို အမိအရ လှမ်းဆွဲတာပါလားနော်…
နောက် ဟို ဂျီးဒေါ် ဂျီးဒေါ်ဆွိကတော့ ပြောရှာ၏။
‘သဂျားလေး… ခရီးပန်းလာတယ်ထင်တယ်၊ နားလိုက်ဦး၊ ပြီးမှ နင်သွားတုန်း ရှုပ်ထား(အဲ) လုပ်ထားတာတွေ ပြောပြမယ်’ တဲ့
မျက်ခုံးတောင် နည်းနည်း လှုပ်ချင်ချင် ဖြစ်သွားသည်။
မန်းဂဇက်ကို မောင်နှင့်တူသည်ဟု တဖွဖွ ပြောနေသော သူကလေး ကတော့ ဖုန်းမှ မျက်နှာမခွာဘဲ လှမ်းနှုတ်ဆက်သည်။
လူချင်းတော့မဟုတ် ချက်တင်မှ နှုတ်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပေ၏။
တစ်ယောက်တစ်မျိုး မရိုးရအောင် တတ်လဲ တတ်နိုင်ကြသူတွေပါတကားးး။
ထိုထိုသော အဆင့်များကို ဖြတ်သန်းပြီးသည့် အခါမတော့ ခြေလှမ်းတွေက
ကဗျာချစ်သူရုံးခန်းထဲမှ ဦးမာဃ၏ စားပွဲ ပိစိကလေးထံ မှာ အဆုံးသတ်သွားသည်။
ထို့နောက်တွင်တော့ အမောအပန်းဖြေ၊ အနားယူအပြီး တွင် အလင်းဆက်က စားပွဲပေါ်သို့ စာရင်းတစ်ခု လာပို့ရှာ၏
‘ဟဲ့ အလက်ဆင်း ဒါ ဘာတုန်း’
‘ကျန်တဲ့ ကဗျာစာရင်းတွေလေ၊ ပြခန်း ၁၀ က မင်းတင်ရမှာမဟုတ်လား အဲဒါကြောင့် ကြိုရွေးဖို့ ပေးထားတာဟ’
‘အင်းအင်း… ဟုတ်ပြီလေ၊ ကဲ ကြည့်ရအောင်…’
အားရပါးရ စာရင်းကို ကြည့်ပြီးသည့်နောက် ဦးမာဃ မျက်လုံးပင် ပြူးသွား၏။
‘ဟဲ့ အလက်ဆင်း စာရင်းက ဒါပဲလားဟ’
‘အေး.. ဟုတ်တယ် ဒီကြားမှာ ကဗျာလက်ကျန်က ဒါအကုန်ပဲဟ’
ပြောလည်း ပြောချင်စရာ.. လက်ကျန်ကဗျာက ပြခန်းတစ်ခန်းစာပဲ ရှိတော့သည်ကိုး။
ဒီလိုဆိုလျှင်တော့ မဖြစ်သေး… ကဗျာစုဆောင်းရေး ပြန်လုပ်ရဦးမည်။
ပြခန်းကိစ္စဖြင့် ကြားရက်တွေမှာ အလုပ်ရှုပ်မှာမို့ ပြခန်းတင်ပြီးမှ စုဆောင်းရေး လုပ်ရန် တေးထားလိုက်သည်။
ကဗျာ ဓားပြအဖွဲ့တော့ ဖြစ်လိမ့်ဦးမည်…။
လက်ထဲမှာ ရှိနေသည့် ကဗျာတွေကို ကြည့်ပြီး သကာလ
ဦးမာဃ ပြခန်း(၁၀) အတွက် ကဗျာ ဆယ်ပုဒ် ရွေးချယ်လိုက်လေသည်။
ပထမဆုံး ရှေးကဗျာ ရွေးရမည်။
ရှေးကဗျာ အတွက် သိပ်တော့ စိတ်မပူလှ၊ ဟိုရှာ ဒီရှာ လုပ်လိုက်လျှင် တစ်ပုဒ်တော့ အေးအေးဆေးဆေး ပင်။
သို့သော် အခန့်သင့်ချင်တော့ ကဗျာက ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်လာ၏။
ကဗျာရွေးနေစဉ် ဦးကြီးမိုက်ဆီက ဖုန်း ဝင်လာသည်။
‘သိကြားရေ ငါတို့ ဖတ်ရွေးအတွက် လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးဖို့ လုပ်တော့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကို သွား သတိရလို့ကွာ အဲဒါ မင်း ရှာပေးပါလား’
‘ဟုတ်ကဲ့ပါ ဦးမိုက်ရေ ဘယ်ကဗျာလဲဗျ’
ဒီလိုနဲ့ ကဗျာ တစ်ပိုင်းတစ်စ ကို ကြားမိလိုက်သည်။
ကြားစဉ်ကတည်းက ကြိုက်မိသော စာသားများက ရှာပြီးလို့ တစ်ပုဒ်လုံး ဖတ်ပြီးသောအခါ ပို ကြိုက်သွားလေသည်။
ထိုသို့ဖြင့် ဆရာ ဗန်းမော်ညိုနွဲ့ ၏ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းဝိုင်း ကဗျာကို ပြခန်းထိပ်တွင် ချိတ်ဖြစ်သွားပါသည်။
နောက် ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို ရှာပြန်တော့ တောက ကိုရင် ပေးထားသော ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို သွား မြင်သည်။
ဒါနှင့်ပဲ ကိုရင့်ကို လှမ်းဆက်ကာ ကဗျာတောင်းလိုက်တော့ အားလုံး အိုကေ။
ထို့နောက်မှာတော့ လေးခ၏ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို သွားတွေ့ပြန်၏။
လေးခ မှာ ပြခန်းအတွက်လဲ ပုံမှန် ကဗျာတွေ ပို့ပေးနေသူမို့ တကူးတက ခွင့်တောင်းစရာ မလို ဒါနှင့်ပဲ ကဗျာရွေးပြီးတာနှင့် လှမ်း အကြောင်းကြားလိုက်သည်။
ဆက်ပြီး ကဗျာစာရင်းမှာ ထပ် မွှေတော့ ကိုကမ်း၏ ကဗျာတစ်ပုဒ် ထွက်လာပြန်သည်။
သို့ဖြင့် ကိုကမ်းကို လှမ်း ဆက်လိုက်သည်။
‘ကိုကမ်းရေ ဒီအပတ် ပြခန်းမှာ ကိုရင့်ကဗျာကို သုံးချင်တယ်ဗျာ အဆင်ပြေမလားဗျ’
‘အာ… ပြေပါတယ် ဦးသိကြားရေ၊ သားကဗျာ ထပ် ယူချင်ရင်လည်း ပြောဗျာ’
‘ကောင်းပါပြီဗျာ… ဒါဆို နောက်ထပ် ကဗျာလေးတွေ ပို့ပေးပါဦးနော်’
ခွင့်တောင်းရင်းနှင့် ကဗျာ စုဆောင်းရေးအတွက်ပါ တစ်ခါတည်းပြောထားလိုက်သည်။
တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်၊ ကောင်းလေစွ။
ကိုကမ်းပြီးတော့ တစ်ဆက်တည်း ကိုအာဂဆီကို လှမ်းဆက်လိုက်သည်။
‘အစ်ကိုရေ ဒီအပတ်ပြခန်းလည်း အစ်ကို့ကဗျာလေး ထည့်ချင်တယ်ဗျာ၊ အဲဒါ လှမ်း ခွင့်တောင်းတာပါ’
‘သြော်…ဟုတ်ပြီလေ၊ တခြားရော ဘာလိုသေးလဲ’
‘လောလောဆယ်တော့ မလိုသေးဘူးအစ်ကို၊ ကဗျာလေးများ ထပ် ရရင်တော့ မဆိုးဘူးဗျ’
အင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အကြောင်းကြားတာ မဟုတ်ဘဲ ကဗျာထပ်တောင်းတာ ဖြစ်နေပြီ၊ လျှော့ဦးမှ…။
နောက်ထပ် ခွင့်တောင်းဖို့ ကျန်သူက အောင်မိုးသူ၊ သူ့ကဗျာလည်း ထည့်ရန် ရွေးထားလိုက်သည်။
ပြီးတော့ အွန်လိုင်းကနေ လှမ်းပြောလိုက်သည်။ ကဗျာတစ်ပုဒ် ပြခန်းထဲကို ထပ်ရောက်လာ၏။
ကဗျာစာရင်းကို ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ ကဗျာဆရာ ငါးယောက် ဖြစ်နေပြီမို့ ကဗျာဆရာမများဘက် လှည့်လိုက်သည်။
ပထမဆုံး ကဗျာတောင်းရန် သတိရသူက မနေခြည်။
သို့သော် သိပ်လည်း မတောင်းရဲ၊ ဟိုတစ်ခါ ဂျီးဒေါ်ဆွိ တောင်းတုန်းကတောင် ဆွိက နားလည်လို့လား လို့ ပြန်မေးနေတာ ဆိုတော့ ကိုယ့်အလှည့်လဲ အဲလိုဆိုရင် အခက်။
မတောင်းရင်လည်း ကဗျာနည်းနေမှာမို့ သုံးခါလောက် အစမ်းလေ့ကျင့်ပြီးမှ ဖုန်းလှမ်းခေါ်လိုက်သည်။
‘ဟဲလို… အစ်မရေ၊ ဒီအပတ် ကဗျာပြခန်းအတွက် ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်လောက် လိုချင်လို့ပါ’
‘အင်း.. ရတယ်လေ၊ ဘယ်ကဗျာလိုချင်လဲ ရှာလိုက်ပေါ့’
‘အဲ…ရပါတယ်ဗျာ၊ ကျွန်တော်တို့ မရှာတော့ပါဘူး အစ်မပဲ တစ်ပုဒ် ရွေးပေးလိုက်ပါ’
‘ဟုတ်ပြီလေ..၊ ဒါဆို တစ်ပုဒ် ပို့လိုက်မယ်’
တော်သေးသည်၊ ဒီတစ်ခါတော့ အေးအေးဆေးဆေး ပြီးသွား၏။
ထို့နောက် တွေ့မိသည်က တောင်ကြီးသူမ သမ္ဘူလ (အဲလေ) ရင်ငြိမ်းနွေး ၏ ကဗျာ။
ဖတ်အပြီးမှာ ကြိုက်မိသည်မို့ သူ့ကိုလည်း လှမ်းဆက်ကာ ပါမည့်ရက်ကို ပြောရသည်။
နောက်ထပ် ကဗျာတောင်းဖြစ်သူကတော့ မနှင်းဖြူ။
မနှင်းဖြူ မှန်မှန်ဖော (အဲလေ) မနှင်းဖြူ မှန်မှန်ပြော ဆိုပြီး ဘာသာပြန်တွေရေးလိုက်၊ လောကကြီးကို တခြားဘက်က လှည့်ကြည့်လိုက်နှင့် အလုပ်ရှုပ်နေသူ။
‘ဗျို့၊ ဒေါ်နှင်းဖြူ ကျုပ် ကဗျာတစ်ပုဒ် လိုချင်တယ် အဲဒါ ရမလား’
ပြခန်းအတွက် နောက်ထပ် တစ်ပုဒ် တိုးသွားသည်။
ဘယ်သူ့ဆီက နောက်ဆုံး တောင်းရမလဲလို့ တွေးတော့ ထပ်ထွက်လာသူက မရွှေကြည်။
သို့ဖြင့် ကဗျာပေးရန် မက်စိ(အဲ) မက်ဆေ့ခ်ျ ပို့ကာ ပြောလိုက်သည်။
အားရဝမ်းသာ ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ ရေးထားတာက တစ်ကြောင်းတည်း။
‘I cannot read myanmar font’ တဲ့။ သေဟ။
ဒါနှင့်ပဲ ဖုန်းလှမ်းဆက်ကာ တောင်းလိုက်ရသည်။
ဤသို့ ဤနှယ် ဖုန်းဖြင့်တစ်မျိုး၊ အွန်လိုင်းကတစ်ဖုံ ကဗျာတောင်းလိုက်၊ အကြောင်းကြားလိုက် လုပ်လိုက်ရာ
ဦးမာဃ လက်ထဲ ကဗျာဆယ်ပုဒ် ရောက်လာလေသည်။
ဘေးကနေ၊ ကဗျာတောင်းပုံ၊ အကြောင်းကြားပုံတွေကို ထိုင်ကြည့်နေသည့် အလက်ဆင်းက ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြင့် ငေးကြည့်နေရှာသည်။
တစ်ယောက်တည်း ဟိုဆက်၊ ဒီချိတ်ဖြင့် မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ကဗျာရွေးလိုက်သည်ကိုပဲ အားကျသည်လား၊ ချက်ခြင်းလက်ငင်း ကဗျာဆယ်ပုဒ် ရောက်လာတာကိုပဲ အံ့သြနေသည်လားတော့ မပြောတတ်။
ရလာသော ကဗျာများကို နေရာတကျဖြစ်အောင် စီနေစဉ် စားပွဲရှေ့သို့ မွန်မွန် ရောက်လာသည်။
‘ကဗျာနည်းတယ် ညည်းနေတာ ကြားလို့ ငါ့ကဗျာတစ်ပုဒ် လာပေးတာ၊ မထည့်ရင်တော့ မလွယ်ဘူးမှတ်’
ကဗျာပြည့်ပြီလို့ ပြောဖို့ ကြံနေသော ပါးစပ်ကို အမြန် ဘရိတ်အုပ်လိုက်ရသည်။
တော်ကြာ နောက် ကိုယ့်ပြခန်းတွေမှာ မပေးဘူးဆို အခက်။
အချင်းချင်းပေမင့် သူ့ကဗျာက အာပေါက်အောင် တောင်းရတာ များနေသည်ကိုး။
ကဗျာပေးပြီး ကပ် ပြောသွားသေးသည်။ ‘ဒါ ငါ့ရဲ့ ရင်တွင်းဖြစ် စစ်စစ်’ တဲ့။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ ကာယကံရှင်တွေ သိလိမ့်မည်…ဟီဟိ။
ဒါနှင့်ပဲ ပြခန်း(၁၀) အတွက် ကဗျာ ဆယ့်တစ်ပုဒ် ဖြစ်သွားသည်။
ကဗျာစုပြီးတော့ ပြခန်းကို ဘယ်လိုအပြင်အဆင်နဲ့ ပြမလဲ တွေးရသေး၏။
အရင်ပြခန်းတွေတုန်းက ပြခန်းဘက်မှာ မှတ်ချက် ပိတ်ထားတော့ ကဗျာတွေကို ဆွေးနွေးတာ သိပ်မတွေ့ရ။
ကဗျာ ဆိုတာကလည်း ဖတ်ပြီးတာနှင့် ခံစားချက် တန်း ပေါ်သည်လေ။
ဒါကြောင့်မို့ ဒီတစ်ခါ ပြခန်းမှာ ဟိုဘက်သည်ဘက် နှစ်ဖက်လုံးမှာ မန့်လို့ရအောင်၊ မန့်တာတွေ တူအောင် လုပ်ရန် တွေးမိသည်။
ဒါနှင့်ပဲ ကဗျာပြခန်း၏ နည်းပညာ တာဝန်ခံ မောင်မာဃ နှင့် ပြခန်းမှူး ဦးမာဃ တို့ တစ်ခေါင်းတည်း ချာလည်ရိုက်ကာ ပို့စ်တွေကို ရှာဖွေမွှေနှောက်လိုက်တော့ အဆင်ပြေသွားသည်။
ပြခန်း (၁၀) ကို စတင် ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။
ကလစ်တစ်ချက်ခေါက်ကာ ပြခန်းသို့ ဝင်ပါရန်
ပြခန်းတံခါးဝတွင် စာရွက်တစ်ရွက်ကို ဆွဲကပ်လိုက်သည်။
ပြခန်း (၉) မှ ကဗျာစာရင်း
တော်သလင်းလဖွဲ့ – ဖိုးသူတော်ဦးမင်း
ဟုတ် ဟုတ်ရဲ့လား အဖွားရယ် – ခင်ခ
ငါ ဒီည ခေါင်းကိုက်နေတယ် – လင်းစက်ရာ
Dream of Love – မဟာ မြန်မာ
စံပါယ်မျှားခြင်း – ကမ်းဝေး
Smile – Sonny
အကောင်းမြင်စိတ် – ခက်သီ
နုပျိုမှုထဲ ခုန်ချချင်တယ် – အာဂ
လူသားရဲ့ အရှုံး – အလင်းဆက်
ကိုယ့်အလှည့်ကျတော့ – မိုးမင်းသား
နှောင်ဖွဲ့ခြင်း – ကိုပေါက်(မန္တလေး)
ကြွားချင်း – မဟာရာဇာ အံစာတုံး
နောက်ထပ် စာရွက်တစ်ရွက်ကိုတော့ သူ့ဘေးမှာ ကပ်လိုက်သည်။
ပြခန်း ၁၀ မှ နှစ်သက်ရာ ကဗျာလေးများကို ရွေးချယ်ကြဖို့ မဲစာရင်း
ထို စာရွက်များ၏ အောက်နားမှာ စာရွက်ကလေး တစ်ရွက်ကို ထပ် ကပ်လိုက်ပြန်လေသည်။
အားလုံး တွေ့မြင်ကြတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။
ကဗျာချစ်သူများ ကဗျာပြခန်း အမှတ်စဉ် – ၉ ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးကဗျာကိုတော့ …
ဗုတ်ပေါင်း (၂၃) ဗုတ်နဲ့ နုပျိုမှုထဲ ခုန်ချချင်တယ် ဆိုတဲ့ ကဗျာက ရသွားပါတယ်။
ရေးသူ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီးသားနော်။
မမှတ်မိရင် ထပ်ကြည့်လိုက်။ တကယ်အာဂ လူသားပဲ။
ကဗျာပြခန်း သို့ ကဗျာများ ပေးပို့ လိုပါက
alinsett.art@gmail.com သို့ လိပ်မူ၍ ပေးပို့ နိုင်ကြပါကြောင်းးး။
ပေးပို့လာမည့် ကဗျာများကိုလည်း စောင့်မျှော်နေပါကြောင်းးးး။
ကဗျာပြခန်းအတွက် ကဗျာ နည်းနေပါကြောင်းးးးးး။
နတျပွညျသမ်မတ အဂ်ဂမဟာ သရစေညျသူ အဂ်ဂမဟာ သီရိသုဓမ်မ နမြေိုးဗလကြျောသူ ဝဏ်ဏကြျောထငျ သီရိပြံခြီ အလင်ျကာကြျောစှာ သီဟသူရ အောငျဆနျးသူရိယ ဦးမာဃ CJ # 9292010
တာဝတိံသာမှ အက်ဆေးများကို ဖတ်ရတယ်ဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်တောင် တာဝတိံသာ ရောက်သွားသလို….
ဒါ့ထက်ပုခုံးပေါ်က စာမေးပွဲဝန်ထုပ်ကြီးကို ပစ်ချပြီး ကဗျာပြခန်းလာထိုင်နေတယ်ပေ့ါ။ :winK:
တာဝတိံသာကနေ အက်ဆေးတွေ ပို့လာတာ လေးဆယ်လောက်တောင် ရှိပြီလားမသိ
ပခုံးပေါ်က ဝန်ထုပ်ကြီးက ပစ်ချလို့မှ မကြာသေး ပြန်ရောက်လာပြန်ပြီ
ဆက်ဆက် ပြန်လာ ဗုတ်ပါကြောင်းးးးးးးးးးးး
ကဗျာတွေ တစ်ကြိမ်ထက် တစ်ကြိမ်ပိုကောင်းလာတယ်လို့ ပြောရင် လွန်မယ် မထင်ပါကြောင်းးးးးးးးးးး
ရွေးရခက်လို့ အကြိမ်ကြိမ် ပြန်ဖတ်လိုက်ရပါကြောင်းးးးးးးးးးးးး
နာ နီ့ကို အနိုင်ကျင့်ထားတာ ပေါ်ကုန်ပီပေါ့။ မထူးပါဝူး။ နောက်ခါလည်း အနိုင်ကျင့်မယ်နော်
ဒီလိုနဲ့ အကျပ်ကိုင်လာတာလည်း များပါပြီကွယ်
ပြခန်းကလူတွေတကယ်တော်ပါတယ်။ ကျိုးစားကြတယ်။ အားကျပါအိ။ တခုပဲကြားမိတာလေး အင်း————ကဗျာ ဒမြဆိုလား ဗုတ်ပြီးပါကြောင်း
ကဗျာပါ ထပ်ပို့ရင်တော့ ကျေးဂျူးကဘာ
ဂုလို တိုတိုလေးလည်း ထည့်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇုးပါ
ပုံတွေ လိုချင်ရင်လည်း ပြောပါနော့
ကျုပ်လည်း ကျရာ ဇာတ်ရုပ် က ပြ ပြီး ပါပေါ့ လား…
ဒီ လင့် ကို ဆက်ဖတ် ကြ ဖို့ တိုက်တွန်း လိုပါတယ်…
ဇာတ် ပို့ ပါ ခင်ဗျာ…
ခင်ခ လက်ရမ်းစပ်တဲ့ကဗျာလေးတွေကို လစဉ်ပုံမှန်လေးထဲ့ပေးနေကြတဲ့ ကဗျာပြခန်းက လူငယ်တစ်စုကို အလွန်ပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
ဗုတ်ကတော့ ပြခန်းထဲဝင်ကာ ဖတ်ပြီးတော့ ဗုတ်လိုက်ပါ့မယ်။
ခင်ခ ရွာမှာ ပိုမိုရှင်းတစ်ခု လုပ်ဖို့စိတ်ကူးနေမိပါတယ်။
ကဗျာဘက်မှာလုပ်ရင်ကောင်းမလား စာဘက်မှာလုပ်ရင်ကောင်းမလား ဝေခွဲမရသေးသမို့ ဦးမာဃ ကို ရွာပြင်မှာ အလွတ်သဘောတွေ့လိုပါတယ်လို့ စကားပါးခဲ့ပါရဲ့ဗျ။
အခုထိ လစဉ် ကဗျာ ပို့ပေးနေလို့
ကျွန်တော်တို့ ကဗျာချစ်သူတွေကလည်း ကျေးကျေးပါဗျာ
ရွာ ပိုမိုးရှင်း အတွက်လည်း
ဒီ တစ်ပါတ် ကဗျာ တွေ အတော် ကောင်း တယ်
သဂျား ရေ…ဗုတ် မရွေး သေး ဘူး..
ပိတ်ခါနီး မှ ရွေး တော့ မယ်..
(၁၄) လား (၁၅) လား တစ်ရက် ရက် ပေ့ါ..
ကဗျာ ကို ရေးတာ
စာမျက် နှာ အများဆုံး ဘယ်လောက် ဆိုရင်
ပြန်ခန်း အတွက် အဆင် ပြေ နိုင် မလဲ
ရှည် တယ် ဆိုတာ ကို..
ချုံ့ ပေး ချင် လို့ ပါ…
A4 စာရွက် တစ်မျက်နှာခွဲလောက်အထိ အဆင်ပြေဖို့ရှိပါတယ်။
အဲလောက်အထိတော့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိနေပါတယ်ဗျာ
တူညား တွေ ကဗျာ တိုတို ဘယ်သို့ဘယ်ပုံ ရေးကြသည် မသိ..
အားကျပါ ဘိ ဗျာ…
၅ မျက်နှာ ချုံ့ လိုက် တာ .. ၃ မျက်နှာ ရတယ်..
A4 စာရွက် တစ်မျက်နှာခွဲလောက်.. ပဲ တဲ့..
တဂျား မှာ အဲသည်လို ရက်စက် တတ် တဲ့
အသည်း နှလုံး ချိမှန်း မတိ ဘူး ဗျာ…
ချုံ့ ရင်း ချုံ့ ရင်း နဲ့..
နာ့ ဟာ လေး သေးသေး သွား ပြီ…
ကဗျာ ပြောပါ တယ်..
ဆရာကြီ ဗန်းမော်ညိုနွဲ့ရဲ့ “လက်ဖက်ရည်ကြမ်းဝိုင်း…”
ကဗျာလေးကို ပီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့ညနေဘက် ကိုစွယ်တော်အိမ်ရောက်တော့
သူကစပြောတာ…အဲဒါ လသူတစ်ပိုဒ်ရွတ် ကိုယ်တစ်ပိုဒ်ရွတ်နဲ့
နောက်တော့ သကြားမင်းကိုယ်တိုင်ဆင်းမ မှပဲ အဆုံးသပ်နိုင်တော့တယ်
ငယ်ငယ်ကကျောင်းပြဋ္ဌာန်း ကဗျာလက်ရွေးစင်ထဲပါခဲ့ သင်ခဲ့ရတာပေါ့
အာတီဒုံတို့ မမတို့ အဘဖောတို့ ရီလိုက်ကြတာ
ကြီးမိုက်လုပ်မှ တို့လည်း ရွာကသက်ကြားအိုတွေဖြစ်ကုန်ပြီဆိုပီးတော့….
အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျွန်တော်လည်း ကဗျာရှာဖို့ လုပ်နေတာ
ဦးမိုက်တို့ကိုရှာပေးပြီးတဲ့အထိ ထည့်ဖို့ မတွေးမိသေးဘူး
နောက်မှ ပြန်ဖတ်ပြီး ကြိုက်သွားတာ
ရွာ သက်ကြားအိုတော့ ဟုတ်လောက်ပါဘူးဗျာ
ပညာစောကြော ၊ တုံ့ လှယ်ပြော၍
နှီးနှောကြရာ ၊ ဘုံရိပ်သာတည့်။
လက်ဖက်ရည်ကြမ်း ၊ တလင်ပန်းဖြင့်
စိတ်ဝမ်းလက်ညီ ၊ ရွာသစ်တည်ကာ
ကျီသစ်ပုံသွင်း ၊ အားနှင့်ရင်း၍
အီ…အနော့်ကဗျာထက် ကောင်းတဲ့ကဗျာများကို ဗုပ်တော်မူကြပါကုန်။ နောက်မို့ဆိုရင် အနော့်ကို လူတွေ မသင်္ကာဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းပါ။ခင်ဂျာ..။ မှန်တာကိုပြောတော်မူရရင် ကျန်တဲ့ကဗျာဆရာများရဲ့ ကဗျာများက ပိုပြီး သစ်လွင်၍ အနှစ်သာရရှိကြောင်းဖြစ်လို့…..ရှက်မိတယ်။
ဒီလအတွက် ကျွန်တော်ဒီနှစ်ပုဒ်ကို ကြိုက်ပါတယ်။ ဘ၀ရယ်။အမှောင်စအား.. ဆွဲခြုံသူရယ် ၂ပုဒ်ပါ။ အမှောင်စအား.. ဆွဲခြုံသူကိုတော့ ပိုကြိုက်တယ်။ တခြားကဗျာတွေလည်း သူဟာနဲ့သူ ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အကြိုက်ကတော့……စောစောကနှစ်ပုဒ်ပါ။
အစ်ကို ကြိုက်တဲ့ ကဗျာလေးများကို ကိုယ်တိုင်ပဲ ဗုတ်သွားပေးမယ်ဆိုရင်
အဲဒီ ကဗျာအတွက် တစ်မဲ ထပ် တိုးတာပေါ့ဗျာ…
ကဗျာ နဲ့ လူနဲ့တွဲပြီး ပြောထားတာမဟုတ်တဲ့ အတွက်
ဗုဒ်ရင် ကဗျာကို ကြိုက်လို့ ဗုဒ်တာပါ အာဂရေ။
စိတ် စနိုးစနောင့် မဖြစ်ပါနဲ့။
တစ်လ ၁၀ ပုဒ်ကတော့ သားတို့လည်း တောင်းနိုင်တယ်ဆို။
ဂျီးတော်.. ဆိတ်သား မစား ရတာ နှစ်ချီ ပြီ ဆို..
အခု တော့ ဆိတ်သား ချည်း ပဲ ချက်စား နေပါ လား..
ဆိတ်သား ခြောက် ချောင်း ကြော် ဆိုရင်
မြန်မာ ဘီယာ နဲ့ သိပ် လိုက် ဗျ…
တာမီး ဘယ်မှာ ဆိတ်သားစားမိလို့လဲလို့။
reply to Mahar Myanmar
ဂျီးတော်…အခု တလော ကိုယ့်ဘာသာ ဆိတ်သား ချည်း ချက် စား နေတာ ကို
သတိ မထား မိဘူး ထင်ရဲ့…
ပင်လယ်စာ တို့ အသီး အရွက် တို့ ပြောင်းစား ဦးလေ..
ပြော ချင် ဘူး နော်.. ( ပြော ပြီး ပေါ့ )
ပင်လယ် စာ ဆို …ပို ကောင်း တယ်..
ဘာ ဓါတ် တွေ များ ဆို လား ပဲ…
ပြခန်း (၁၀) …
​ဖြောင်း ​ဖြောင်း ​ဖြောင်း….
၁၁ မှာ​တော့ .တစ်​မ​နေပါဘူး​နော်​…
ကဗျာကတော့ နည်းနေလို့ ပြန် စုနေရပါကြောင်း
သို့သော် ပြခန်းကမူ ဆက်လက် ချီတက်နေမည် ဖြစ်ပါကြောင်း…..
ပထမအကြိုက်ဆုံး ( အကြိုက်ဆုံးတွေထဲကအကြိုက်ဆုံး ) ကဗျာက..
အမှောင်စအား..ဆွဲခြုံသူ…ဆိုတဲ့ ကဗျာဖြစ်ပါတယ် .။
အဲဒီ ကဗျာ ကိုဖတ်ပြီး….
ပြန်လာပြီး ဝုတ်ပါ့မယ်။ အခုတော့ ပြေးပြီ။
ဘယ်တူတွေ ရေးတာမှန်းတော့ သိဝူးပေါ့လေ
ဘ၀ နဲ့ အမှောင်စ အား ဆွဲခြုံသူ နဲ့
အောက်တိုဘာလ ကဗျာကို vote သွားပါတယ်ဗျိုးးး
ဘယ်သူတွေ ရေးတယ် ဆိုတာကို
အဲဒီကျ ဘယ်သူရေးလဲ သိမှာပေါ့..
ပြခန်းကို ကဗျာလေးတွေလည်း ပို့ပေးပါဦး ဗျို့
ကဗျာ တွေ ကို ဒုတိယမိ ခံစား ပြီး ဗုတ် ခဲ့ လိုက် ပါ ကြောင်း..
ရင်ထဲ ကို အထိရှ ဆုံး က တော့ ဘ၀ မှာ ခဏခဏ
ကြုံတွေ့ ရင် ဆိုင် ခဲ့ ရဘူး တဲ့.. အခြ အနေ ကို
ယုံကြည်ချက် မဲ့ ဆိုတာ ကလေး မှာ သွား တွေ့ မိတယ်…
တစ်ခါတစ်ခါ စိတ် မာန် တင်း ပြီး တုံး တိုက်တိုက် ကျားကိုက်ကိုက် ဟဲ့
ဆို ပေမယ့် .. ခြေထောက် တွေ ရှေ့ မတိုးနိုင် လေးလံ နေတာ…
ကိုယ်တွေ့ ပါ …
နောက်… ဘ၀ မှာ.. ကျရှုံး မှု အကြိမ်ကြိမ် ..အနှိမ်ချ ဆက်ဆံခံရမှု အကြိမ်ကြိမ်
တွေ အောက် မှာ.. ကိုယ့် မာန် ကို တင်း ကိုယ့် မာန တွေ ချီ လိုက် ရတာ..
ကူညီမယ့် လက် ကို တောင် … မာန ကြောင့် ပုတ် ချ မိ ခဲ့…
တကယ် တော့..မာန ကြောင့် ပဲ.. အကြောင်း အကျိုးမဲ့ ဆင်ခြေ တွေ ရှိ တတ် နေတာ..
ဘ၀ မှာ မာန နဲ့ လည်း ပျော်ခဲ့ ဘူး တယ် လေ.. အဲဒါ ကတော့ ..
အမှောင်စ အား ဆွဲခြုံသူ ပေ့ါ ….
နောက် တစ်ပုဒ် ..ကိုယ် ကြီး ပြင်းခဲ့ ရာ ပတ်ဝန်းကျင် က စနစ် အမှား ရဲ့ သား ကောင် တွေ..
အဲဒီ သား ကောင် တွေ အချင်းချင်း ကြား မှာ ကို ကြီး နိုင် ငယ် ညှင်း သဘောတရား အပြည့် နဲ့… ဦး ခေါင်း တွေ ညွတ် ခဲ့ ရတာ… ဒါ ခေါင်းညိတ် တာ မဟုတ် ဘူး…စာရိတ္တ တွေ စရိုက် တွေ ပညာ တွေ.. ဆင်ခြင်ဥာဏ် တွေ ရိုက်ချိုး ခံ ရတဲ့ .. ကိုယ်..
ကျွန်တော် က နောက် အနှစ် ၂၀ ဆို ဘာ ဖြစ် မလဲ ..သိချင် ပါဘိ ဗျာ…
နောက် တစ်ပုဒ် က ..ဘ၀……သိင်္ဂါရ စစ်မျက်နှာ…အဲဒီလို တွေ ကျန်နေပေမယ့်
( သုံးပုဒ် ပဲ ရွေးခွင့် ပေး တဲ့ သကြား ကို စိတ် ဆိုးတယ် )
ဒါဆို တစ်ပုဒ်ပဲ ရွေးခိုင်းရမလား ဟီဟိ
မဲပေးပြီးပါကြောင်းးးးးးးးးး သတင်းကောင်းးးးး ပါးအပ်ပါတယ်
လွမ်းရတဲ့ ဘဝ ငိုချင်း တဲ့လား ကွယ်။
(ကဘာ အိမ်စာ ရေးပြီး၊
မရိုက်ရသေး လို့ ရိုက်ပြီး တာနဲ့ ပို့ပါမယ် ဟေ့။)
အရီးတောင် အိမ်စာတွေ မှန်မှန်လုပ်လာပြီ
ကဲကဲကဲ.. ဒီတစ်ခါ သကြားမင်းရဲ့ ပြခန်းမှာတော့ ထုံးစံတိုင်းပါပဲ…..
ရမ်းသမ်းပြီး နံမယ်လှတဲ့(သဘောကျတဲ့) သုံးပုဒ်ကိုရွေးပြီး ဗုတ်သွားပါတယ်……
ဗုတ်ပြီး ရလဒ်လေးကြည့်လိုက်တော့ ကျနော် ခန့်မှန်းချက်လေးတွေ မညံ့တာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်…
ကျနော်ရမ်းသမ်းဗုတ်လိုက်တဲ့ သုံးပုဒ်က ရလဒ်မညံ့တဲ့ အနေအထားမှာရှိနေလို့ပါပဲ………..
ကဗျာလေးတွေလည်း ပေးဖို့ လုပ်ဦး ဗျ
ဒီညမှာ ဗုတ် ပိတ်မဗျို့
အဲဒါ ဗုတ်ဖို့ ကျန်သေးတဲ့သူတွေများ ရှိရင် အချိန်ရှိတုန်း သွက်သွက်ကလေး လာ ဗုတ်ကြပါဦး လို့